Nin u dhashay dalka Afghanistan oo labada dhegood ka jaray xaaskiisa – Xeernews24
Nin u dhashay dalka Afghanistan oo labada dhegood ka jaray xaaskiisa
Haweeney u dhalatay dalka Afghanistaan ayaa seygeedii ama ninkii qabay waxaa uu ka gooyay labada dhegood waxaana haatan lagu daweynayaa haweeneydaas isbitaal ku yaal dalka Afghanistan.
Falkan oo ka dhacay gobolka Waqooyiga ku yaal dalka Afghanistan ee Balkh ayaa gabadhan oo 23 jir magaceedana lagu sheegay Zarina ay sheegtay inaysan ogeyn wax dambi ah oo ay gashay balse seygeedii intuu xidhxidhey kadibna labada dhegood gunta ku jaray.
Ninka lagu eedeeyay inuu dhagaha ka jaray xaaskiisa ayaa la sheega inuu baxsaday balse booliska ay baadigoobayaan. Haweeneydan oo lagu magacaabo Zarina ayaa hadda lagu soo waramayaa in xaaladdeeda ay caadi tahay balse ay maskaxiyan isku buuqsan tahay.
Zarina ayaa warbaahinta u sheegtay in ninkeeda uu hurdo ka soo kacay oo uu dhibkaasi u gaystay iyada oo aysan dhicin wax muran ah oo dhex maray, waxaa ayna intaa ku dartay in muddo dheer uu aad u xumaa xidhiidhka iyaga iyo ninkeeda.
Waxaa ay sheegtay in ninkeeda uu yahay nin shaki badan oo inta badan ku eedeeya in ay ragga kale la hadasho marka ay booqato reerkeeda, waxaa ayna dalbatay in si deg deg ah gacanta loogu soo dhigo oo maxkamad la soo taago.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/dhegaha-lag-ajaray-170x114.jpg 114 170 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-02-02 00:03:252017-02-02 00:03:25Nin u dhashay dalka Afghanistan oo labada dhegood ka jaray xaaskiisa
Maraykanka oo qorsheynaya in dalal horleh uu ku daro wadamada uu xayiraada ku... Maxaa ka Run ah Horumarka Djibouti?